Govinda Raj Joshi | तनहुँका जनता असक्षम प्रतिनिधिका कारण सिकार भएका छन्ः जोशी
तनहुँका जनता असक्षम प्रतिनिधिका कारण सिकार भएका छन्ः जोशी
Damauli khabar Daily
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता गोविन्दराज जोशी अहिले गृह जिल्ला तनहुँमा व्यस्त छन् । तनहुँबाटै जनप्रतिनिधि भएर देशकै महत्वपूर्ण मन्त्रालयको वागडोर सम्हालिसकेका जोशी अहिले सरकार र पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिकामा नरहे पनि गृह जिल्लाका भूकम्पपीडितको राहत र पुनस्र्थापनामा सक्रिय छन् । जिल्लामा विकासप्रेमीको पहिचान बनाएका पूर्व मन्त्री जोशी अहिलेका जनप्रतिनिधिको कमजोर पदर्शनको कारण २० हजार बढी घर ध्वस्त भए पनि तनहुँले विशेष राहत र पुनस्र्थापनामा सरकारी सहायता पाउन नसकेको दाबी गर्छन् । उनै नेता जोशीले दमौलीको सामुदायिक रेडियो दमौली एफएम ९४ थोप्लो २ मेगाहर्जलाई दिएको अन्र्तवार्ताको अंश
महाभूकम्पलगत्तै जिल्लाका विभिन्न भागमा निरक्षणमा हुनुहुन्यो । अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
यो हामीहरुका लागि अत्यन्त पीडादायक घडी हो । यो कहिले जान्छ थाहा पनि थिएन र हामीले रोक्न सक्ने अवस्था थिएन । महाभूकम्प हुँदा काठमाडौं थिएँ । यसमा परेर एक त देशभरीकै मानिस पीडित भएका छन् मेरो आफ्नो थलो तनहुँ र वरपरका दाजुभाई दिदीबहिनीहरुका लागि यो पीडामा केही भए पनि दुःख मिसाउन सक्छु कि भनेर म काठमाडौं छोडेर जिल्ला आएको हुँ । म जिल्ला आएको तीन हप्ता भन्दा बढी भयो ।
गाउँ डुल्दा अनुगमनका क्रममा मैले तनहुँ अत्यन्त पीडामा रहेको पाएँ । म जिल्लाभर घुम्दा करिब पाँच हजार घर पूर्ण ध्वस्त, १४ हजार घरमा आंशिक क्षति अनि १० हजारमा सामान्य क्षतिको हिसाब गर्दा जिल्लाभर ३० हजार घरमा नोक्सानी भएको मैले देखें ।
हाम्रा गाउँहरुको अवस्था कस्तो छ भने घर पहिरो गएको छ । त्यहाँ मानिस बस्न सक्ने अवस्था छैन । यो अवस्थामा नेपाल सरकारका कर्मचारीले गरेको मेहनतको प्रशंसा गनैपर्छ । प्रहरी, सेना र सरकारी कर्मचारीले दिएको योगदान यो घडीमा प्रशंसनीय छ ।
जिल्लाभर २० हजार घर पूर्ण क्षति जस्तै छ । तर त्यहाँ बस्ने नागरिकहरुले अरु त परै जाओस् पाल पनि नपाएर रोइरहेको मैले देखें । करिब १० हजार पाल वितरण भएको रहेछ जिल्लाबाट । अचम्मको कुरा शुरुमा एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत जाने भनियो । तर पनि गाउँमा सांससदहरुको उपस्थिती भने नभएको भेटियो ।
उनीहरुले आफन्त र कार्यकर्तालाई राती राती राहत दिने गरेको पाइयो । पहिलो कुरो गाउँमा सभासदको उपस्थिती छैन दोश्रो जहाँ छ, त्यहाँ भेदभावपूर्ण गतिविधि पाइयो । मैले यो अवस्था गाउँ भ्रमणपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि जानकारी गराएँ । तनहुँ भाग्यमानी जिल्ला पनि हो ।
यहाँ विभिन्न दलका नौ जना सभासद छन् । कांग्रेसका पाँच, एमालेका एक र अन्य दलका पनि सभासद तनहुँमा छन् । तर यति धेरै भएका सभासदको भूमिका प्रभावकारी देखिएन । जिल्लामा हेर्दा उनीहरुको कुनै भूमिका पाइएन । सभासदहरुले कसरी जनतालाई राहत दिन सकिन्छ भन्ने सोच्न नसकेको मलाइ लाग्यो । ३० हजार घर क्षति हुँदा पनि तनहुँलाई भूकम्पबाट उच्च संकटग्रस्त सूचीमा पार्न सकिएन । यसमा सभासदहरुको ठूलो चुक देखियो ।
तपाइंले सभासदहरुमाथि आरोप लगाउनुभयो । तर गाउँमा राहत वितरणमा उनीहरु हिंडिरहेका छन् नि
एउटा कुरा के हो भने तनहुँमा नौ जना सभासद छन्, त्यसमा पनि कांग्रेसकै पाँच जना । अझ केन्द्रीय सदस्य पनि छन् । उनीहरुको भूमिका भनेको केन्द्रबाट राहत पठाउने हो ।
क्षतिग्रस्त ३० हजार घरलाई पुग्ने चीजहरु पठाउनु पर्ने हो । उनीहरुलाई पुग्ने सामान पठाउनुपर्ने हो । तर सभासदबाट यो भूमिका निर्वाह गरेको पटक्कै देखिएन । जहाँ गए पनि दाजुभाई दिदीबहिनीहरुको भनाई यो जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्रमा पार्नुपर्ने छ । त्यो सूचिमा नपर्दाखेरी संकटग्रस्त भएका जिल्लाले जुन सुविधा पाएका छन्, त्यसबाट हाम्रो जिल्लाका दाजुभाई दिदिबहिनी बञ्चित भएका छन्, यो निकै दुखद् कुरा हो ।
हाम्रै सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । हाम्रै सरकारका मानिस मन्त्री छन् । सहकार्यको सरकार छ । यो अवस्थामा केन्द्रमा तनहुँलाई उच्च संकटग्रस्तमा पार्नुपर्यो भनेर भन्न नसकेर सभासदहरु गाउँ राहतको नाममा हिंड्नु लाज पचाउने कामशिवाय केही होइन ।
काठमाडौंमा बसेर देखाउनुपर्ने भूमिका उहाँहरुबाट भएन । उहाँहरुको कुरा प्रधानमन्त्रीले सुन्नुभएन । सरकारलाई कुरा सुनाउन नसकेपछि अनि जिल्ला आउनु लाज पचाउने काम हो । या त उहाँहरु असक्षम हो या नियत नै खराब । नत्र यत्रो नोक्सान पर्दा राहत सामग्री जिल्लामा ल्याउन नसक्ने अनि अहिले आएर के हुन्छ ? जिल्लाभर ३० हजार प्रभावित छन् उनीहरुले १० हजार पालले के गर्ने ? बाँकी २० हजार
के गर्ने ? उहाँहरुले संसदमा बोलेको तनहुँबासीले सुन्न पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीकहाँ आफ्नो कुरा सुनाउन उहाँहरु सक्नुहुन्न । यस्तोमा उहाँहरुको भूमिकामा जनताले प्रश्न उठाउन नपाउने ?
मलाई अचम्म लाग्यो । तनहुँ क्षेत्र नम्बर एकका एमालेका पराजित उम्मेदवारले १० हजार पाल वितरण गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो । पराजितले १० हजार ल्याउन सक्दा हाम्रा जितेका सांसदले ३० हजारलाई के गर्ने भन्ने योजना चाहिँ छ कि चाहिंदैन ?
पीडित वस्तीमा पुग्दा कम्तीमा दुई वण्डल कर्कट पाता दिए घरको अस्थायी टहरा बनाएर बस्छौं भन्ने माग धेरैको छ । तर त्यो पनि गर्न नसकेर नोक्सानी भएको ठाउँमा रित्तो हात आएर केही अर्थ देखिन्न । लाज बचाउन जनताले बुझ्दैनन् भनेर होला तर जनाले वास्तविकता बुझिसकेका छन् । हाम्रा सभासदले हामीमाथि अपहेलना र अन्याय गरेको भन्ने बुझाइ मैले गाउँ घुम्दा दाजुभाई दिदीबहिनीबाट पाएँ ।
भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्याएको छ । गाउँका स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, प्रहरी चौकी, सरकारी भवन नोक्सान भएका छन् । जिल्लाको यो नोक्सानीको स्थिती अवलोकन गर्दा तपाईंलाई कस्तो अनुभव भएको छ । अब यो अवस्थामा यहाँको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
म पार्टीको जिम्मेवार मानिस हैन । म कुनै पदमा छैन । मेरो काम जनतालाई ढाढस दिने हो । हो विद्यालय स्वास्थ्य चौकी, गाविस भवन भत्केका छन् । ३० हजार घर भत्केका वा भत्किन्छन् कि भनेर बसेको यो अवस्थामा सरकारको स्थायी समाधान के हो ? अस्थायी बसोबासका लागि के गर्दैछ ? अब १५ हजार दिने कहिले हो ? जेठको मध्य हुन लागिसक्यो । अब ढिलो भए धेरैको बिजोग हुन्छ । धेरेको धेरै क्षति भएको छ ।
धेरैले कम्तीमा आधा क्षतिपूर्ति दिए आफै काम गर्न तयार छन् । उनीहरुले आफ्नो बाँच्न पाउने अधिकारको खोजी गरिरहेका छन् । विद्यालय, गाविस भवन त सरकारले बनाउँछ । तर जनताको घर कसले बनाइदिन्छ ? धेरै ठाउँमा सरकारी जग्गा छ । एक दुई लाख घर बनाउन सरकारलाई गाह्रो पनि छैन । उपयुक्त ठाउँमा घर बनाइदिए समस्या समाधान तत्काल गर्न सकिन्छ ।
यो विपत्तिमा तनहुँमा मानविय क्षति त भएन तर भौतिक क्षति उच्च संकट जिल्लाको भन्दा कम छैन तर पनि तनहुँ किन उच्च संकटग्रस्त जिल्लामा पर्न सकेन होला ?
यो हाम्रा प्रतिनिधिको असक्षमता वा खराब नियतको परिणाम हो । सरकारको प्रमुख पद कांग्रेस एमालेको काँधमा छ । ३० हजार घरमा असर २० हजार लगभग पुरै भत्केको छ । यो अवस्थामा दुवै दलका सभासदले अलिकति जोड गरेको भए तनहुँ संकटग्रस्तको सूचिमा पथ्र्यो । यसमा नपर्नुको कारण या सरकारमा बस्नेले टेरेनन् वा सभासदको अप्रोच पुगेन ।
मानिसहरु रोइकाराई बसेका छन्, पाल खाद्यान्न नपाएर ।
पुग्दा यो पीडा अझ बल्झन्छ । मेरै सामु धेरैले रोएर दुखद् अवस्था चित्रण गरे । बन्दीपुरको एउटा गाउँ ध्वस्त छ । पूर्कोटमा ९२ मध्ये ८२ घर ध्वस्त छन् । त्यहाँ सरकार अनि सभासदको उपस्थिति छैन । यति ठूलो नेक्सानी हुँदा पनि सरकारको प्राथयमिकतामा नपर्दा जनतालाई चित्त दुखेको छ । मलाई पनि पीडा भएको छ । गाउँमा गएर काम गर्छौं भन्नेले त्यति पनि गर्न सकेनन् । तनहुँका जनता असक्षम प्रतिनिधिका कारण सिकार भएका छन् ।
जिल्लालाई उच्च प्रभावितमा पार्न सभासद र प्रशासकहरुबीच छलफल पनि भयो । नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिले त निर्णय नै गरेर पठायो । तर पनि तपाईं केही भएन भन्नुहुन्छ, किन ?
त्यो प्रयास हैन । ठग्ने कुरा मात्र हो । हाम्रा सभासदको राष्ट्रिय हैसियत छ । उहाँहरुले प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीलाई गएर भन्ने हो । जिल्लाका सिडिओ अनि एसपीलाई भन्ने हैन । भन्नुपर्ने ठाउँमा नभन्ने अनि सिडिओ, एसपी वा गाउँको प्रमुखलाई भनेर अर्थ छैन ।
यो जनतालाई झुक्याउने खेल मात्र हो । कहिं नपाएर केन्द्रमा नभएको कुरा जिल्लामा आएर हुन्छ ? नौ नौ जना सभासद महत्वपूर्ण पार्टीका प्रतिनिधि सभासद हुँदा र उहाँहरुकै सरकार हुँदा पनि काम गर्न नसक्ने भन्ने कुरा हुन्छ ? यो उहाँहरुको जिल्लामा माया रैनछ भन्ने कुराको प्रमाण हो । ३० हजारको घर भत्केको छ । साराको नोक्सानी भएको छ । य
स्तो जिल्ला ‘क’ मा नपर्ला ‘ख’मा नपर्ला संकटग्रस्त त हो नि । त्यसमा पनि नपर्ने भने पछि त या सरकारले सभासदलाई टेरेन या नियत खराब हो । यो त जनताप्रति बदला लिएजस्तो लाग्छ, मलाई ।
तपाईंको विचारमा यो समस्याको अब अल्पकालीन र दिर्घकालिन समाधान के छ ?
सबैभन्दा पहिले पीडितलाई खाने बस्ने प्रबन्ध गर्नु जरुरी छ । मर्नेका परिवारलाई पर्याप्त राहत दिइएन । मैले दुई लाख दिनुपर्छ भनेको हुँ । यसमा कन्जुस गर्न हुन्न । घर नोक्सान भएकालाई खाद्यान्न र लत्ताकपडा अनि बास दिनुपर्छ । अस्थायी बसोबासका लागि तुरुन्त दुई वण्डल जस्ता दिनुपर्छ ।
भूकम्प भन्दा ठूलो बिचल्ली अब आउने सम्भावना देख्छु, म ।
सरकारको अर्को काम स्थायी बसोबासका लागि बस्न सक्ने छ छैन भनेर परीक्षण गर्नुपर्छ । बस्न सक्ने छ भने नयाँ घर बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । नभए नेपालका सरकारी जग्गामा डेढ दुई लाख घर बनाएर गाउँका मानिसलाई वस्ती सानुपर्छ ।
पूर्वाधार र रोजगारी दिएर स्थायी बसोबासका लागि भूकम्परहित घरको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ । यो आपतकालिन समयमा बाटो वा अरु विकास जरुरी छैन । सबै पैसा उत्थानमा लगाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि विश्वासमा लिए सहायता मिल्छ । देश र विदेशको सहयोग पछि पीडितको समस्या स्थायी समाधान गर्नुपर्छ । सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो यसका लागि प्रष्ट कार्य योजना ल्याउनुपर्छ ।
धेरै आत्तिएका छन् । उनीहरु जनप्रतिनिधिबाट पनि विश्वस्त छैनन् । यो जटिल अवस्थामा सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो पुनस्र्थापना योजना ल्याउनुपर्छ । तत्काल अस्थायी बस्ने खाने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सक्दिन पैसा छैन भन्न मिल्दैन । हालसम्म सरकारबाट कुनै योजना आएको छैन, आउनुपर्छ ।
सरकार र विभिन्न दलहरुले टहरा बनाउन उद्घोष गरेका छन् । तपाईको विचारमा यो प्रयासमा के भएको भए राम्रा हुन्थ्यो ?
जनतालाई सेवा गर्छु भन्नु राम्रो हो । दलले गर्छु भनेको पनि राम्रो हो । तर त्यतिले पर्याप्त छैन । यो काम सरकारको हो । कतिलाई घर चाहिएको छ तथ्यांक निकालेर कति सरकारले गर्ने अनि कति दलले बनाउने भन्ने टुंग्याउनु जरुरी छ । दलले सहयोग गर्ने हो तर यो जिम्मेवारी सरकारको हो, यसबाट ऊ पन्छिनुहुन्न । हुँदा हुँदा अब राहत दिने काम गाविस सचिवसम्म पुग्यो । के सचिव यो सबै जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्षम छन् ? जेठ जान लागिसक्यो । पानी आउन थाल्यो । अब सरकारले ठोस योजना ल्याउन ढिला गर्नुहुन्न ।
एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा टहरो बनाउने रे यो कसरी सम्भव छ ? सरकारको योजना आउनुपर्यो कतिवटा बनाउने भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्यो । स्थायी घर कति बनाउने ? सबै बनाउने हो कि पैसा हो कि सिमेन्ट के हो दिने ? यो सबै आउन नसकेकाले सरकार पनि अल्मलिएको जस्तो लाग्छ । सरकारको प्रष्ट दृष्टिकोण छैन । सामञ्जस्य पनि छैन ।
मुख्य निकाय र मन्त्रालयबीच समन्वय पनि छैन । अब यसो गर्दा असार लाग्छ त्यसले अझै ठूलो विपद् आउने हो कि जस्तो लाग्छ । त्यसै भएर मैले जनताको समस्या सरकरी निकायमा उजागर गरेको हुँ । गैरसरकारी निकायसंग भन्ने काम गरिरहेको छु । म आफैले व्यक्तिगत रुपमा कति सक्छु तर ती ठाउँको कुरा सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउने काम मैले गरिरहेको छु । मेरो प्रयास जनताको समस्या सुन्ने ठाउँमा पु¥याउने हो, त्यो काम मैले गरिरहेको छु ।
यो विपद्को घडीमा जिल्लावासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
म भूकम्पले निधन भएकाको परिवारमा समवदेना व्यक्त गर्दछु । दिवंगत आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्छु । सरकारले पीडित सबै हाम्रा जनता हुन् भनेर उनीहरुको सुरक्षाको जिम्मा लिनुपर्छ । यो अवस्थामा धैर्य लिनुस् नआत्तिनुस् भनेर आश्वस्त पार्नुपर्छ । , यतातिर चाँडो सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
केही नभए सांसदको विकास कोषको पैसा चार करोड छ, त्यही देखिने गरी गर्नुपर्छ । सांसद विकास कोषको मात्र रकम भए पनि पुर्नस्थापना उद्धार र सहयोगमा खर्च भए कम्तीमा पीडितले केही भए पनि राहत पाउँथे
त्यसमा निर्वाचित र मनोनित सभासदको ध्यान जाओस् भन्ने मेरो चाहना छ ।
म जिल्लावासीलाई दुःख पर्दा सम्झनुहोला र सधैं तपाईंको साथमा छु भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
प्रस्तुतीः पवन पौडेल